Caasimada Yuhuuddu Awal Xaggee Aheyd? – Radio Daljir
Diseembar 7, 2017 4:22 b 2
Dhegayste Radio Daljir: “Kaalay Muslimiintu, siiba Carabtu, miyey awal hurdeen, mise dunida waa ka maqnaayeen!”
Shalay oo taariikhdu aheyd 6da Diseenbar 2017, Madaxweynaha Maraykanku waxa uu ka dhabeeyey ballanqaad uu qaaday xilligii olalaha doorashada Maraykanka, kaas oo ahaa “haddii aan guulaysto Jerusalem waxa aan u aqoonsanayaa caasimadda Israa’iil, safaaradda Maraykankana waa ka rarayaa magaalada Telaviv, waxa aana u rarayaa caasimada Israa’iil ee Jerusalem.”
Waxaa xusid mudan iyo badanaa madaxweynayaasha Maraykanku ay ballanqaadkaas rarida safaaradda Maraykanka ay dhammaantood ka sinnaayeen, haba ugu danbeeyeen Madaweyne Bill Clinton iyo Madaxweyne Obama. Saas oo ay tahay, ugu danbayn waxaa ballanqaadkii ka dhabeeyey Madaxweyne Trump, asaga oo khudbadiisii aqoonsiga Jerusalem ku yiri, “maanta waxa aan halkan isugu nimid in aan xaqiiqada daaha ka rogno: xaqiiqada ah in Jerusalem [Qudus] ay tahay caasimada Israa’iil. Tani wax kale ma aha ee waa xaqiiqada dhabta ah ee maanta jirta. Xaqiiqo kaliya ma aha ee waa ammuur sax ah in lagu dhaqaaqo. Waa ammuur loo baahnaa in la dhaqaajiyo.”
Annaga oo maanka ku hayna hadalada Madaxweyne Trump, hadaba aan u soo laabano dhegayste Radio Daljir oo asna yiri, “”Kaalay Muslimiintu, siiba Carabtu, miyey awal hurdeen, mise dunida waa ka maqnaayeen!”
Hadaba markii aad labadaas hadal isku miisaanto, waa hadalka Madaxweyne Trump iyo kan dhegaystaha Radio Daljir, waxaa kuu soo baxaysa xaqiiqada maanta ka jirta Bariga Dhexe, taas oo ah laba arrimood.
Waa midda koowaad e, Bariga Dhexe waa lagu kala adkaaday, oo Maraykanka iyo Isra’iil waxa ay isla garabsadeen xoog iyo xirfad aan dunida horey looga arag. Taas waxaa daliil u ah sida Carab iyo dhammaan Muslimiinta adduunku ay maanta ugu baraarugeen xaqiiqo awalba aan la iska indhatiri karin, taas oo ah in Qudus ama Jerusalem ay awalba aheyd caasimadda dalka Yuhuudda. Waa fadhiga Raysal Wasaaraha Yuhuudda. Waa fadhiga Madaxweynaha. Waa fadhiga Baarlamaanka. Waa fadhiga Dowladda. Waa magaalo dhinac kasta ay dowladda Yuhuuddu xukunto. Waa magaalo ay ayagu ka dhigteen ayna weli u tahay caasimadoodii. Waa xaqiiqo aan marnaba maanta la iska indhatiri karin, kii dhego iyo indhola’ mooyee. Waa xaqiiqo aan baryo iyo heshiis toona ku imaan. Waa mid ku timid qori caaraddi.
Waa midda labaad e, Carab iyo Muslin oo dhan waxa ay hadana mar kale iska indhatirayaan in Sacuudiga iyo Israa’iil oo awalba heshiis ku ahaa ammuuro badan, ay maanta yihiin saaxiibbo kuwa isugu dhaw, iskagana dhow saaxiibtinimo kale oo Sacuudigu maanta la leeyahay dowlad kale oo Muslin ah.
Haddii intaas kore oo dhan la iska indhatiray, bal hadana aan qofka Soomaaliga ah ee aan siyaasadaha adduunka la socon ku biirino in cadowga koowaad ee dowladda Sacuudiga uusan maanta aheyn dalka Yuhuudda ee ay yihiin 3 dal oo kala ah Yemen, Suuriya iyo Iran. Waa saddex dal oo wada Muslin ah.
Yemen iyo Suuriya ayaga mar hore baa dhulka lala simay.
Iran sida Suuriya iyo Yemen Sacuudigu luuqyo uma uu soo marin ee bareero cad baa Boqorsugaha Boqortooyada Sacuudiga, ahna Wasiirka Difaaca ee ugu da’da yar wasiirada difaaca ee adduunka ka jira maanta, ahna 30 jir ay reer Galbeedku ula baxeen MbS (Maxamed bin Salmaan) uu kal hore u yiri, Iran waa cadowga koowaad, sidii loo cirib tiri lahaana waxaa iska kaashanaya Sacuudiga, Yuhuudda iyo Maraykanka. Waxa kale oo uu ku daray, “hoggaamiyaha Iran waa Hitler-ka Bariga Dhexe,” meesha uu Madaxweyne Trump ku tilmaamey “nin muhiim ah oo yimid waqtigii loo baahnaa.”
Haddii dhegaystaha Radio Daljir uu weli ka dhegola’yahay xaqiiqooyinka Bariga Dhexe, aan mar kale idin xasuusino fadeexaddii Sacuudiga ka qabsatay markii Amiir MbS uu casumay Raysal Wasaaraha Lebnaan, Saad Xiriiri, deedna inta xabsi guri dhigay ku khasbay in uu iscaliso. Xiriiri waa iscasilay, laakiin markii uu Beyruut ku laabtay buu fashiliyey qorshihii Sacuudiga, kana laabtay iscasilaadii Sacuudigu ku khasbay. Shaki kum jiro in qorshahaas fashilmay ay Sacuudiga iyo Israa’iil isla wadeen, uuna ahaa mid lid ku ah Iran iyo Ururka Xisbullah ee Lebnaan.
Ha illaawin Saad Xariiri kahor Sacuudigu waxa uu u yeeray Hoggamiyaha Falastiin, Maxamuud Cabbaas, waxaana lala damcay laakiin uu diiday in uu aqbalo hindisaha nabadeynta Maraykanka ee uu wado Jared Kushner, oo qaba gabadh uu Madaxweyne Trump dhalay, haystana diinta Yuhuudda. Waa isla Jared Kushnerka garwadeenka ka ah in Jerusalem (Qudus) ay tahay caasimadda Israa’iil, loona raro safaaradda USA ee hadda ka hawlgasha Telaviv.
Qorshaha Madaxweyne Trump, kan wiilkiisa asna 30 jirka ah ee Jared Kushner, iyo kan saaxiibkiis ahna Amiir Maxamed bin Salmaan (MbS), dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga isla markaasna ah Wasiirka Difaaca Boqortooyada, ma uu aha mid hadda lagu wada salaley ee waa mid degsanaa illaa iyo olalihii doorashada madaxtinimada Maraykanka, kaas oo uu Donald Trump ku guulaystay.
Arrin kale baa ayana la yaab leh, taas oo ah, “Maraykanku ammuurihii Bariga Dhexe dhexdhexaad kama noqon oo Israa’iil buu la saftay,” ee illaa iyo shalay ay hoggaamiyayaasha Carabtu ku hadaaqayeen. Haba yaabin e, laakiin “goorma ayuu Maraykanku weligiis dhedhexaad ka ahaa ammuuraha Bariga Dhexe?”
Laakiin haddiiba siyaasaddii Carbeed iyo hawlihii Bariga Dhexe ay halkaas marayaan, xaqiiqaduna noqotay mid aan la wajihi karin, amaba aan la hayn caqligii lagu waji lahaa, ma hayno gabogabo aan ka aheyn tan dhegaystaha Radio Daljir ee “kaalay Muslimiintu, siiba Carabtu, miyey awal hurdeen, mise dunida waa ka maqnaayeen!”
Laakiin Soomaali ayana mid baa weli u taal: mar haddii intaas oo dabin aan maanta ka noolnahay, “war casharka Yamen yuusan na seegin.” Maanta adduunku waxa uu marayaa meel jiritaanka la isku diidanyahay, Soomaalina Yamen waxba ma dhaanto, kaliya waa ka yara nasiib badanahay. Laakiin illaa iyo intee?
Qormooyinka Daljir 41 Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 16944
mohamuf 2 years
fekir wangsan baad kahadashee radio daljir merci
Cabdisemed Cali 2 years
Aad baad u mahadsantahay radio daljir runtii waad abbaartey, makulatahay ninkan maraykanka xukumaa isagoon aan waddamada carabta oggolaansho kahaysan kuma dhawaaqikareen inuu yidhaahdo quddus waa caasimaddii yuhuudda, khaasatan waddamada carabta ee uu kadhammeeyey waxaa ugu horreeya sucuudiga, imaaraatka,masar ee u xulafowdey burburinta islaamka, markaa waa sidaa aad u sheegtay, aad baad u mahadsantahay